Liverpool Oo Ka Soo Laabatay Madrid Iyagoo Ka Mahadcelinaya Karbaashkii Ku Dhacay & Sababta Ka Danbeysa | Laacibnet.net
HomeWararka Champions LeagueLiverpool Oo Ka Soo Laabatay Madrid Iyagoo Ka Mahadcelinaya Karbaashkii Ku Dhacay & Sababta Ka Danbeysa
Liverpool Oo Ka Soo Laabatay Madrid Iyagoo Ka Mahadcelinaya Karbaashkii Ku Dhacay & Sababta Ka Danbeysa
Qeybtii hore Liverpool waxay aheyd mid aad iyo aad u xun, haddii uu jiro tilmaame ka sii xun taas waa ay u qalantay Liverpool.
Iyadoo Liverpool ay ilaa iyo haatan ku jirto xilli ciyaareed adag islamarkaana ay rajeynayaan inay koob uun ku guuleystaan hadana qaab ciyaareedkoodii qeybta hore ee kulankii Real Madrid wuxuu ahaa 45tii daqiiqo ee ugu xumeyd xilli ciyaareedkan.
Labo gool ayay Real Madrid ku dhalisay sideed isku day oo ay sameeyeen halka Liverpool ay ku guuldareysatay inay hesho xitaa hal darbo qeybtii hore, waana markii ugu horeysay ee ay sidaan ku dhacdo tan iyo 2014.
Mohamed Salah, Diogo Jota iyo Sadio Mane wax farxad ah kama helin afka hore, halka dhanka daafaca ay jirtay sideed taabasho oo Real Madrid u sahashay inay la wareegaan koontaroolka ciyaarta.
Taabashadii ugu horeysay waxay ka soo baxday cagta midig ee Toni Kroos. Wuxuu kubada u dhigay Vinicius Jr oo xabadka ku dejistay (taabasho 2aad) ka hor inta uusan dabamarinin (taabasho 3aad) goolhaye Alisson Becker.
Sagaal daqiiqo ka dib, Kroos ayaa kubad soo qaaday (taabasho 4aad) waxaa si qaldan u madaxeeyay (taabasho 5aad) Alexander-Arnold oo kubada lugta u geliyay Marco Asensio kaasoo ka dulqaaday (taabasho 6aad) goolhaye Alisson oo faraha foodooda ku taabtay (taabasho 7aaad) ka hor inta uusan weeraryahanka Real Madrid kubada dhameystirin ka hor inta uusan soo gaarin Andy Robertson taasoo aheyd taabashadii 8aad.
Alexander-Arnold ayaa bartilmaameed u ahaa Real Madrid iyagoo weeraro ka soo qaadayay garabkooda bidix iyo Naby Keita oo la bedelay seddex daqiiqo ka hor waqtiga nasashada ayaa ahaa labadii xiddig ee ugu liitay garoonka qeybtii hore ee ciyaarta, xaqiiqdiina marka laga reebo Ozan Kabak oo labo jeer kubad badbaadiyay ma jiro ciyaaryahan Liverpool oo sameeyay wax lagu amaani karo qeybtii hore.
Liverpool ayaa qeybtii labaad garoonka soo gashay iyagoo aaminsan inaysan macquul aheyn inay u ciyaaraan si ka xun sidii qeybtii hore, taasoo caawisay.
Waxay u muuqdeen kuwa horumar sameynaya oo kubad si degdeg ah u dhaqaajinaya. Kaliya lix daqiiqo markii ay socotay qeybta labaad Mohamed Salah ayaa gool marti ah u dhaliyay taasoo nolosha ku soo celisay tartanka wareega 8da.
Laakiin goolkaas ka dib hadana waxay ku laabteen hurdadooda. Liverpool daafacooda ayaa mar kale la fashiliyay iyadoo Luka Modric uu kubad u dhigay Vinicius Jr kaasoo dhaliyay goolkiisii labaad.
Liverpool ayaa ceyrsasho u gashay goolka labaad laakiin waxay weli ahaayeen kuwa xaga danbe ka furan ugu danbeyn waxay Madrid ka soo tageen iyadoo farqi labo gool ah lagu hogaaminayo ka hor kulanka Anfield ee todobaadka danbe.
Marka la eego in 10 ka mid ah ciyaartoydii dheeshay finalkii 2018 ee labada kooxood ee inay ku soo bilowdeen kulankii xalay, waa ay adkeyd in ilaawo wixii dhacay seddex sannadood ka hor iyadoo natiijada labada kulan ay aheyd 3-1 laakiin mar kale Kroos, Modric iyo Casemiro ayaa goo’aamiyay ciyaarta.
Si kastaba, Liverpool weli waxay heysataa fursad. Lug labaad oo la ciyaarayo. Waxay ku soo bixi karan 2-0 oo ay ku badiyaan gurigooda.
Liverpool ayaa ka mahadnaqeysa in guuldaradii soo gaartay aysan ka weyneyn wixii ku dhacay, waxay ka mahadcelinayaan in semi-finalka uusan weli gacantooda ka bixin.